Meelaha qaabeeya caruurnimadeyda – Abschir Hassan Foundation
Meelaha qaabeeya caruurnimadeyda
Maadaama magaalooyinka North Rhine-Westphalia lagu soo bandhigay duulimaadka dib ugu soo noqda Istanbul ilaa Dusseldorf shaashadda, waxaanan ogaanay inaan ku dhoweynay inaan soo dego, waxaan dareemay dareenadayda mana aanan ilaawi karin ilmada.
Dhinaca kale, waxaan dareemay in aan ku laabanayo guriga, carruurteyda, ama ugu yaraan meel u dhow caruurteyda, maadaama dhammaantood ay ku noolaan jireen guriga oo ay ku faraxsan yihiin in ay wiilkayga keenaan guriga.
Waxaan sugayay inaanan marti ahayn, hase yeeshee waxaan ku jiraa gurigeyga, dabeecadeyda caadiga ah. Dhinaca kale, rabshadayda dareenka ayaa sidoo kale ahayd waddankayga, oo aan ku dhashay.
Inkasta oo booqashadani aanay ahayn markii ugu horreysay ee Soomaaliya, waqtigan ayaan helay dareen badan oo aan fahmey asal ka badan, gaar ahaan marka la eego taariikhda hore. Maalin iyo badhkii aan ku qaatay caasimadda Muqdisho, oo si kalsooni leh loogu yeeray Xamar, waxaan ugu dambeyntii lahaa wakhti aan ku soo booqdo meelaha qaarkood oo qaabeeyay caruurnimadeyda iyo dhalinyarada. Wax walbana way ii muuqdeen, way ka duwan yihiin wixii aan xusuustay.
Mararka qaarkood ma hubo in ay dhab ahaantii ahayd meelaha aan ku xasuusto sidaas si cad. Sawirada madaxayga ayaan ku haboonayn kuwa hadda aan arkay. Laakiin mar labaad, wax kasta waan u aqoonsaday mar kale, xasuusta noloshu waa noolaatay, wax walbana waa cadhooday, waxaanan ku sugnaaday in aan degenahay. Dareenkaygu wuxuu ahaa mid murugo leh, waxaan nafteyda ku arkay gabadh ama gabadh yar, waxaan arkay goobaha aan sii joogay. Adeerkey ayaa i sii waday wadada waddooyinka weyn ee magaalada Kasabalbalaare, oo aan hadda u muuqan sidii ay ku sameeyeen xasuusta aan ku hayo.
Ugu dambeyntiina, waxaan aqoonsaday iskuulkii hore, Iskuulka Kasabalbalaare iyo masaajidka kale ee Masaajidka Shiikh Cali Sufi. Sidaa daraadeed taasi waxay ahayd jidka aan badanaa u diray si aan u iibsado raashin. Waxaa jiray dukaanka, roodhida, barafka iyo farmashiyaha. Dhismayaal badan ayaa arkay burburkii dagaalka, qaar kalena sanooyinkii la dayacay. Waxaan aqoonsaday geedaha qaar. Dhammaanba lama filaan ah, waan ogaa waxyaabo badan. Laakiin markii aan ku soo laabanney gurigeyga, waxaan bilaabay inaan shaki galo. Miyuusan ahayn guriga oo ka weyn, dherer iyo awood badan? Gurigu wuxuu ii riyooday aniga xilligaas, taas oo aniga ila ahayd inaan gaadhay qoyskeyga. Shaqadaydii wakhtigaa waxay ahayd inaan xaaqo ubaxyada iyo caleemaha geedaha. Inkastoo aanan jeclayn hawl maalmeedkan, waxay i siisay fursad aan kula xiriiro dhallinyarada kale markaad iska dhigtay inaan shaqadayda qabanayo.
Hadda waxaa jiray faahfaahin dheeraad ah, geedo dhowr ah ayaa la dhacay iyo guriguba waxay u muuqdeen kuwo ka yar sidii hore. Waxaan weydiiyay aabaheyga adeer ee caloosha dadka aan xusuustay. Waxa uu ogaa waxyaabo badan oo la sheego inta aan ka tagnay habkii hore ee iskuulka. Haddaanu dib dambe u soo noqon? Miyuu ahayn jidadka intiisa badan? Shineemo aan marmar booqanayey aabahey, Shaneema Soomaaliya, weli way taagan tahay, iyadoo aan ku dhicin dagaal iyo wakhti go’an. Qalabkeena duuban ee aan jeclahay Xalow Xaaji Ciise, si kastaba ha ahaatee, mar dambe ma jirin. Xusuusto xasuusto, waxaan ku socday jid yar. Lama oggola inaan u kaxeyno dugsigeyga hore ee dugsiga sare sababtoo ah waxay ku taallaa degmada, taas oo lagu xiray gaadiidka caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, baraf yar oo ka soo horjeeda taallada Jidka Sayidka ayaa wali ku jira, xitaa haddii aan la furin. Maskaxdayda, waxaan arkay aniga naftayda halkaas taagan oo qado ah inta lagu jiro nasashada qadada. Xusuustaydii, waxaan ku soo laabtay dugsigeygii hore ee quruxda badnaa, Shool Xaawo Taako, halkaa oo ka soo jeeday dabaqada labaad oo loo qaybiyey nacnac, qalimaan iyo buugta buugta ardayda. Dhismaha cajiibka ah, oo loo adeegsaday inuu ahaado kaniisad, ayaa ku dhawaad ​​gebi ahaanba burburay. Murugo ayaa i naxday. Iyada oo naxdin leh, waan aqaanay gurigii uu dhakhtarka ilkuhu ka shaqeynayey wakhtigaas, kaas oo iga jiiday ilig aan lahayn suuxdinta daanyarka bararsan.